China Perforated metal nsu panel n'ihi na ụkpụrụ ụlọ ngwa Manufacturer na Supplier | Oghere
The perforated mpempe akwụkwọ bụ mpempe akwụkwọ metal e mechanically ọkpọ ọkpọ na-etolite ọtụtụ oghere nakawa etu esi. O siri ike iti mgbe a bịara n’ịgba fencing. Ogige mpempe akwụkwọ a mechiri emebi nwere njirimara nke oghere nzuzo na ọdịdị mara mma ma jiri ya tụnyere waya ntanetị.
PRO.FENCE na-enye ihe mgbochi mpempe akwụkwọ e ji ọla kọpa mee ma mechie ya na ntụ. Ngwá ike na ịdị elu nke ígwè dị elu na-eme ka ọ dabara adaba maka ịgba mgbidi. Emechara na ntụ ntụ ntekwasa-eme ka a dịgasị iche iche nke agba izute gị dị iche iche ji achọ mkpa. Ewezuga maka ịgba fenti eji eme ihe, mpempe akwụkwọ awara awara nwere ọtụtụ ngwa dị iche iche na ọrụ ihe owuwu, gụnyere mgbidi acoustical na paneli ụlọ, ogwe ọkụ na-ekpuchi ọkụ, anwụ anwụ, na ọnụ ụzọ ámá na ọtụtụ ojiji ndị ọzọ. Site na nhọrọ kachasị elu nke usoro ihe eji arụ ọrụ, mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-aghọwanye ewu ewu na atụmatụ ụlọ na nkọwapụta.
Perforated metal Ibé akwụkwọ bụ multi-nzube ngwaahịa na nwere dị iche iche ngwa. Enwere ike iji ya maka ụlọ ụlọ, steepụ, mbara ihu, mkpuchi mkpuchi maka igwe. A na-ahazi ya na ngere ma jiri ya dị ka ihe nchebe na ihe ịchọ mma maka ihe onwunwe gị.
Panel ọkpụrụkpụ: 1.2mm
Ogwe ogwe: H600-2000mm × W2000mm
Biputere: 50 × 50 × 1.5mm
Emechara: ntụ ntụ ntekwasa
1) Izi ezi na Ikike
Ngwaọrụ anyị dị elu nwere ike ịhazi ogwe igwe eji eme ihe n'ụzọ ziri ezi ga-agba mbọ hụ na ogwe aka nwere ike igboju mkpa gị ma dabaa na saịtị ahụ nke ọma.
Anyị nwere ike na-enye perforated panel dị iche iche ihe nakawa etu esi gụnyere gburugburu onu, square oghere, slotted oghere na-ezitekwara ya na dị iche iche na agba. Ọ nwere ike icho mma ma tinye otu amara maka ihe onwunwe gị.
3) Ogologo oge ọrụ
Perforated metal nsu bụ ihe ngwọta kasị mma ma ọ bụrụ na anya n'ihi na a ngere ọma mgbochi corrosion na inogide na ogologo oge. PRO.FENCE mere ya site na mpempe akwụkwọ na-eme ka galvanized ma mee ya na electrostatic ntụ ntụ ntekwasa iji hụ na inye ọrụ na-adịte aka
Nkebi NO.: PRO-13 Ebute :bọchị: -21BỌCH 15 15-21 Nbanye ngwaahịa: CHINA
Nke gara aga: BRC welded ntupu ngere maka Architectural ngere
Osote: M ekara kpaliri welded ntupu ngere N'ihi Solar Plants